kAAYYOO LIVE: Where is the peace that Abiy promised? – Kichuu
HomeAfaan OromooTVkAAYYOO LIVE: Where is the peace that Abiy promised?
Amaarri lafa humnaan qabatee jiru haga Muddee 30tti gadhiisee akka bahu kallattiin ka’ame.
Lafa bal’aa bulchiinsa Tigraay jala ture kan akka Walqaayit, Xagadee fi Raayyaa faa keessatti caasaan Bulchiinsaa Naannoon Amaraa diriirsaa jiru seeran ala waan taheef hatattamaan diigame kan Bulchiinsa Koree Yeroo Tigraayin akka bakka bu’us qajeelfamni kennameera.
Tahus, qondaalota Naannoon Amaaraa keessaa hedduun qajeelfama kana hin fudhanne. Sababaa kanaanis lollii fi diigumsi PP keessatti dhalachuun waan hin oolle jedhameera. Ibsa bal’aa qabxii 10 paartiin PP baase guutuun isaas TV Amaaraa irratti akka hin dubbifamne uggarameera.
Namni sabaaf qabsahu tokko Qabeenya dhuunfaatti qabu lubbuu tokkittii qabu kennee sabaaf falma.Fedhiin sabaa hundi bilisummaa keessa jira.gatiin bilisummaa qaala’aa dha. jechi BILISUMMAA jettu gatii guddaa nama kaffalchiisti. Sabni tokko qabsaa’oota isaa irraa bilisummaa keef wareegamuu ykn si bilisoomsuu irraa kan hafe qabsaa’oota kee irraa waan biraa hin eeggatin.
Lubbuun ofiisheerra dabartee sabaaf biyya ofiif falmitu qaalii dha.haqa sabaa falmuuf of kennuun sabicha birattis waaqa birattis kabaja dha.
Kabaji waaqaa gaditti kabajamtoota kabachiistoota haqa sabaaf haa ta’u.
Qabsaa’aan kabajamuu qaba .
~ Humni Waraanaa PP halkan ka’aanii Magaalaa marsu.
~ Buufata Konkolaataati akka konkolaatan tokko hin baane dhorku.
~ Milishaa, RIB fi humna addaa oromiyaa kanneen warra Magaalaa marsan irraa hafan mana irra deemanii hirribaa nu kaasu. Sanaa booda Billaa, eeboo, waan qara qabu hanga uleetti fuudhi gadi bahi nuun jedhu, hin qabu yoo jette RIB manakee galtee kun maaloodha jettee dirqiin nu fuusisti.
~ Namoota hirriba irraa kaasanii meeshaa qara qabuufi hanga uleetti baatan bakka tokkotti walitti nu qabu.
~ Sakatta’insa #Shanee deemna nuun jedhu, xiqqoo gara bosonaatti gadi siqanii Ummata Gurmuun Socho’u Viidiyoo nu waraabu. Gaazexeessitooti OBN Godinaalee irraa dhufanii jiru.
~ Xiqqooma erga gadi nu butanii walitti nu qabanii waanuma arrabsoo Shanee jedhuun walgayii gaggeessu.
~ Amma Dhaadannoo jechaa Magaalaatti deebina jedhu.
~ Dhaadannoo kan jedhee jechisuu bakka biraati fidu. Warri dhufanii Dhaadannoo jedhan kun ijoollee umuriin Qeerroodha. Sana booda Milishaafi Kaabineen walmakanii sagalee guddaan Dhaadannoo balaaleffannaa Shanee jedhu dhageessisu.
~ Magaalaa erga nu seensisanii daa’mni waa hin beekne dhufteema itti makamti. Gaazexeessitooti OBN Godinaalee irraa dhufan Vidiyoo waraabu.
~ Konkolaataa fidanii dhaabanii irra ba’aanii iyyaafi waan hin jirreen waan ummati isaan faana jiru fakkeessuun Sardamaafi muddamaan dubbatu. Xumurameera galaa jedhanii nu galchu.